You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Medicines / D- RIBOSE
၁. ကလာပ်စည်း တွေ ရဲ့ စွမ်း အင် အ တွက်
က လာပ် စည်း များ အ တွင်း ထုုတ် လုုပ် သည့် စွမ်း အင် ATP ဟာ လူ တ ယောက် အ သက် ရှင် သန် နေ ဖိုု့ အ လွန် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။
ကလာပ်စည်း တွေ စွမ်းအင် မ ထုုတ် လုုပ် နိုုင် တော့ တဲ့ နေ့ ဟာ သေတဲ့ နေ့ ပါ ပဲ။
အဲ ဒီ တော့ ATP ရဲ့ structure ဖွဲ့ စည်း ပုုံ ကိုု ကြည့် ကြ ရ အောင်။
စွမ်းအင် ဟာ D Ribose ရယ်၊ Phosphate သုုံး လုုံး ရယ်၊Adenine လိုု့ ခေါ် တဲ့ ပရိုု တင်း ဓာတ် တစ် မျိုး ရယ် နဲ့ တည် ဆောက် ထား ပါ တယ်။
RIBOSE SUGAR က ကား တ စီး ရဲ့ main frame လိုု ATP ရဲ့ main frame ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ မ ရှိ ရင် စွမ်း အင် လိုု့ ခေါ်တဲ့ ATP လုုံးဝ မ ဖြစ် နိုုင် ပါ။
Three high energy phosphates are attached to the main frame and serve asagas tank of the car.
Ribose တည်း ဟူ သော main frame ကိုု စွမ်း အင် တွေ ပေး မဲ့ Phosphates bond ၃ ခုု က လာ ပြီး တွယ် ရ ပါ တယ်။
ပရိုုတင်း ဓာတ် တ မျိုး ဖြစ် တဲ့ Adenine ( သြဇာဓာတ် )က ဒီ main frame ရဲ့ ကား စတီရာ ရင် Steering wheel ဖြစ် ပါ တယ်။
၂. ကလာပ်စည်း တွေ ရဲ့ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ဗီဇ လိုု့ ခေါ် တဲ့ DNA, RNA တွေ မှာ ပါ နေ တဲ့ အဓိက ဓာတ် လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
Deoxyribonucleic acid, Ribonucleic acid. ကျွန်မ တိုု့ ဗီဇ တွေ ရဲ့ အဓိက main frame လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ ပေါ် မှာ မှ လာ ပြီး protein sequences တွေ က လာ ဆက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ D ribose ကိုု ထုုတ် လုုပ် နိုုင် ပေ မဲ့ လိုု့ သူ ရဲ့ ထုုတ် လုုပ် နိင် တဲ့ နှုံး ဟာ နှေး ကွေး တာ မိုု့ အရေး ပေါ် လိုု လာ တဲ့ အ ခါ ထုုတ် လုုပ် ရေး ဟာ လိုု အပ် ချက် ကိုု အမှီ မ လိုုက် နိုုင် ပါ။
ဒါ ကြောင့် လဲ နှလုုံး သွေး ကြော ပိတ် ပြီး heart attack ရ တဲ့ အ ခါ အောက်စီဂျင်ဓာတ် နည်း နေ ပြီ ဖြစ် တဲ့ အ တွက် နှလုုံး ကြွက်သား များ ဆက် လက် အလုုပ်လုုပ် ရန် အ တွက် စွမ်း အင် အရေး တ ကြီး လိုု တဲ့ အ ခါ D ribose အိမ် မှာ ရှိ ခြင်း အား ဖြင့် အရေး ပေါ် အ နေ နဲ့ ဖျော် သောက် မယ် ဆိုု ရင် နှလုုံး ကြွက် သား များ ပျက်စီး ခြင်း မှ အ တော် လေး ကာ ကွယ် ရေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ Damage to the heart muscle will be limited.
ပျက်စီးမှု နည်း ရင် recovery လဲ ပိုု ကောင်း မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Stent ထည့် ထား သူ တွေ၊ နှလုုံး ရောဂါ သမား တွေ အ မြဲ မှီဝဲ သိုု့ မ ဟုုတ် ဆောင် ထား သင့် ပါ တယ်။
ဥဏှောက် နဲ့ အာရုုံကြော ရော ၈ါ သ မား တွေ အ တွက် က တော့ ရှယ် ပါ ပဲ။
စဉ်း စား ကြည့် လေ။ နှ လုုံး၊ ဥ ဏှောက် နဲ့ ကြွက်သား များ ဟာ ခန္ဓာ ကိုုယ် ထဲ မှာ အလုုပ် လုုပ် ရ ဆုုံး ဆိုု တော့ စွမ်း အင် အ လိုု ဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
ထိုု နည်း တူစွာ ပါ ဘဲ၊ အားကစားသမားတွေ ကြွက်သား တွေ ကိုု အလွန် အသုုံး ပြု ကြ ရ တာ မိုု့ သူ တိုု့ အ တွက် ဆိုု ရင် လည်း အ ကောင်း ဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် တခါ မြန်မာ ပြည် မှ ဘော်လုုံး အသင်း ကိုု နိင် စေ ချင် ရင် D Ribose powder သွား လှူ ရင် ကောင်း မယ် ထင် ပါ ရဲ့။
အသက် အ ရွယ် ကြီး သူ များ မှာ လည်း များ သော အား ဖြင့် အာဟာရ ဓာတ် များ ချို့ တဲ့ လာ တာ ကြောင့် ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ D Ribose ထုုတ် နှုံး က လဲ ကျ ဆင်း သွား တာ ကြောင့် အား မရှိ ဖြစ် လာ တယ်။ ချိနဲ့ လာ ကြ တယ်။
ဥပါဒ် ဖြစ် မဲ့ သကြား ဖျော် ရည် များ ( Fructose , Sucrose စသည် ဖြင့် )တိုုက် မဲ့ အစား D ribose ဖျော် တိုုက် မယ် ဆိုု ရင် အင်အား တွေ ပြန် ပြည့် လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ရောဂါ ကြီး ကြီး ကျယ် ကျယ် မ ရှိ ဖူး ဆိုု ရင် အသက် ရှည်ဆေး လိုု့ လဲ ခေါ် နိုုင် ပါ လိမ့် မယ်။
သူ က Carbon5လုုံး ပါ တဲ့ သ ကြား မိုု့ Carbon6လုုံး ပါ တဲ့ သ ကြား တွေ နဲ့ လုုံး ဝ မ တူ ပါ။
သက်ရှည် ကျန်းမာစွာ နဲ့ မိမိ ခန္ဓာကိုုယ် ကိုု စောင့် ရှောက် နိုုင် ကြ ပါ စေ။
ဗဟုုသုုတ ဉာဏ် မျက်စိ တွေ လည်း ပွင့် ကြ ပါ စေ။